I-Vulgar Latin - Ukusasazwa kweLatini ngoBukumkani baseRoma
I-Vulgar Latin - Funda ukuba iLatin yesiLatin ibizwa ngokuba yi-Vulgar
Xa isiLatini sisasaza, isiFrentshi, iSpanish, isiTaliyane kunye nezinye iilwimi zifakiwe
Ziziphi iilwimi eziLwimi? | Vulgar Latin | Imithombo
I-Vulgar Latin - UYise weeLwimi zoLwimi oluMoya
Hayi, i-Vulgar Latin ayikho isiLatini igcwele izihlazo okanye nje inguqulelo ye-Classical Latin, nangona ngokuqinisekileyo kwakukho amagama angcolileyo kwi-Vulgar Latin.
Kunoko, iVulgar yesiLatini nguyise weelwimi zaseRomania, isiXhosa saseCalatin, isiLatini esiyifunayo ngumkhulu wabo.
I-Vulgar Latin yathethwa ngokungafaniyo kumazwe ahlukeneyo, apho, ngokuhamba kwexesha, yaba yizilwimi eziqhelekileyo njengesiSpeyin, isiNtaliyane, isiFrentshi, isiCatalan, isiRomania nesiPutukezi.
Kukho abanye abangaphantsi bathetha.
Xa ubukhosi baseRoma banda, ulwimi nolwimi lwabaRoma lwasasazeka kwiintlanga ezazivele zineelwimi kunye neenkcubeko zabo. Ubukhosi obukhulayo babufuna ukuba amajoni abekwe kuyo yonke indawo. La masoldati avela kulo lonke elaseMbuseni kwaye akhulume isiLatini ehlanjululwe ngeelwimi zawo.
IsiLatini esathethwa eRoma
ERoma ngokwalo, abantu abaqhelekileyo abazange bathethe isiLatini esicacileyo esiyayazi njengeClassical Latin, ulwimi lweencwadi zokuqala ngekhulu lokuqala BC
Akunjalo abahloniphekileyo, njengoCicero, bathetha ngokuthetha ulwimi lweelwimi, nangona babhala.
Bungqina? Siyakwazi ukusho ngenxa yokuba, ngolunye uxwebhu lukaCicero lwakhe, iLatini yakhe yayingaphantsi kwefom ephosiweyo esiyicinga njengesiCiceronian.
I-Classical Latin yayingekona iilwimi zamaRoma, nokuba iLatin, ngenye indlela okanye enye.
Ukwahlukana Phakathi kweVulgar Latin kunye neClassical Latin
Kulo lonke elaseMbuseni, isiLatini sathethwa ngeendlela ezininzi, kodwa kwakungokoqobo lwesiXhosa esibizwa ngokuthi iVulgar Latin, isiLatini esitshintsha ngokukhawuleza yabantu abaqhelekileyo ( igama elivakalayo livela kwigama lesiLatin kubantu abaqhelekileyo, njengesiGrike polloi 'abaninzi' ).
I-Vulgar Latin yayiyindlela elula yokubhala isiLatini.
Lehlile iileta zokugcina kunye neelwimi (okanye zidibanisa).
Yanciphisa ukusetyenziswa kweziphene ukususela ekubeni iziphakamiso (i-ad (> de) kunye ne-de) zeza kusebenza kwindawo yokuphela kweziganeko kwizibizo.
Umbala okanye i-slang (into esiyicinga ngayo 'njenge-vulgar') ithatha indawo yendawo yemveli - i- testa ithetha 'intsimbi' ithathe indawo ye- caput 'yentloko'.
Unokubona ezinye zezinto ezenzeke kwisiLatin nge-3 okanye ye-4 leminyaka ye-AD xa uluhlu lwe-227 "izilungiso" ezithandekayo [ngokoqobo, iVulgar Latin, engalunganga; I-Classical Latin, ilungelo] yaqulunqwa yiProbus.
ILatini Iyabulala Ukufa
Phakathi kokutshintshwa kolwimi olwenziwe ngabathethi besiLatini, iinguqu ezenziwe ngamajoni, kunye nokusebenzisana phakathi kweLatini kunye neelwimi zasekuhlaleni, isiLatini sasizobhujiswa - ubuncinane kwintetho efanayo.
Imicimbi yezobugcisa kunye nenkolo, isiLatini esekelwe kwimizekelo yokubhala yeClassical model yaqhubeka, kodwa kuphela abafundisayo abanokuthetha okanye bayibhale. Umntu wansuku zonke uthetha ulwimi lwemihla ngemihla, leyo leyo, ngeminyaka edlulileyo, yahlukana ngakumbi nakwi-Vulgar Latin, ukuze, ekupheleni kwekhulu lesithandathu, abantu abavela kumacandelo ahlukeneyo eBukhosi babengakwazi ukuqonda abantu kwabanye: IsiLatini satshintshwe ngeelwimi zaseRomania.
Nangona zombini i-Vulgar ne-Classical Latin sele ithatyathwe indawo ngeelwimi zaseRomania, kukho abantu abathetha isiLatini. KwiCawa yamaRoma Katolika, isiLatini saseKatolika asizange siphele ngokupheleleyo kwaye sibone ukwanda kwiminyaka yamuva. Enye imibutho isebenzisa ngamabomu isiLatini ukuze abantu bakwazi ukuhlala okanye basebenze kwindawo yokuphila yesiLatini. Kuye kwaba neendaba zomsakazo ezivela eFinland ezithunyelwa zonke kwiLatini. Kukho neencwadi zezingane eziguqulelwe kwisiLatin. Kukho abantu abaya kwiLatini ngamagama amatsha ngezinto ezintsha, kodwa oku kufuna kuphela ukuqonda amagama ngamnye kwaye akusebenzi "ukuphilisa" ulwimi lwesiLatini.
Akukho mgaqo ochasene nabafundi abazithathela izikhuthazo kwi-B-movie, kodwa oku kuya kukumangalisa.
Omnye oluhlu lwee-Classics-L olubhekiselele kwisiLatini njengoLwimi olungapheliyo. Ukuba uzama ukujongana nekota, i-Google iya kuphakamisa ulwimi lwe-Nostratic, kuba iNosferatic yinto ye-neologism yesijeziso. Ulwimi olusisigxina luyi-macro-nosapho olucetywayo lweelwimi. Ulwimi olungapheliyo lulo ulwimi olungapheliyo, njenge-vampire uNosferatu ekuthiwa kuyo.
Jonga kwakhona la manqaku ngamagama nakwii- derivations :
Amagama aseLatini ngesiNgesi I
IsiNgesi sinamagama amaninzi okuvela kwisiLatini . Amanye ala magama ashintshwe ukuba enze amanye amagama angamaNgesi - ngokubanzi ngokuguqula ukuphela (umzekelo, 'iofisi' evela kwisiLatin officium), kodwa amanye amagama aseLatini agcinwe eNgesi. Kula magama, kukho ezinye ezihlala zingaqhelekanga kwaye ngokuqhelekileyo zibonakalisiwe ukuba zibonisa ukuba zingaphandle, kodwa zikhona ezinye ezisetyenzisiweyo ukuba zingabalulekanga njengezivela ngaphandle kweLatini. Akunakukwazi ukuba bavela kwisiLatini. Nazi ezinye amagama anjalo kunye nezifinyezo.
Amagama aseLatini ngesiNgesi II
Ekuguquleleni isiLatin kwisiNgesi
Ukuba ufuna ukuguqulela ibinzana elifutshane lesiNgesi kwisiLatini okanye ibinzana lesiLatini kwisiNgesi, awukwazi nje ukuwafaka amagama kwisichazamazwi kwaye ulindele umphumo ochanekileyo. Awunakho ngeelwimi ezininzi zanamhlanje, kodwa ukungabikho kwintetho ye-one-to-one kukhulu ngakumbi kwiLatini nangesiNgesi.
Amagama aseLatini enkolo ngesiNgesi
Ukuba ufuna ukuthetha ukuba ithemba liyakubetha, unokuthi "akuyi kuvuleka." I-Augur isetyenziswe njengesenzi kwisigwebo sesiNgesi, kungekho ncoko ethile yenkolo. KwiRoma yasendulo, i-augur yayinomntu onqulo oye wabona izinto ezibonakalayo, njengokuba ubukho kunye nendawo ukuya kwesobunxele okanye ngasekunene kweentaka, ukuchonga ukuba ngaba ithemba lilungile okanye libi kwiqumrhu elicetywayo. Fumana ngamagama anjalo.
IQela leGolf le-Muirfield Village: I-Jack Nicklaus Course
Yintoni eboniswa kwiNcwadi?
Unjani Umthi Ophilileyo?
Yintoni IBhayibhile Eyithetha Ngayo Ngocansi?